Samarium Cobalt Magnet Materials, Shiinaha Samarium Cobalt Magnet Materials Qalabka, Shirkadaha, Warshadaha - QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD
La Bixiyay NdFeB
Samatarum Cobalt Magnet Qalabka
Iyada oo qayb ka ah kooxda dhif u ah dhul-gariirka joogtada ah, biriijooyinka samarium cobalt (SmCo) ayaa caadi ahaan ku dhaca laba qoys oo alaab ah. Waxay ka mid yihiin dhulka dhifka ah ee Sm1Co5 iyo Sm2Co17 waxaana loo yaqaan 1: 5 iyo 2:17 agab. Waxaa jira saddex hanaan oo wax-soo-saar oo kala duwan: bir-habeynta magaceeda loo yaqaan 'smCo magnet', oo loo yaqaan 'smCo magnet', iyo duriinta qaabeynta SmCo magnet. SmCo magnet waa wax qabad sarreeya, heer kul hoose hooseeya oo isdaba joog ah oo laga sameeyay samarium iyo cobalt iyo waxyaabo kale oo dhif ah. Faa'iidadeeda ugu weyni waa heerkulka shaqada oo sarreeya-300 digrii centigrade. Waxay u baahan tahay in la dahaadho maxaa yeelay way adagtahay in la baabi'iyo oo la nadiifiyo. Aaladda 'smCo magnet' waxaa si weyn loogu isticmaalaa matoorrada, saacadaha, transducers-ka, aaladaha, booska baaraha, matoor, radar, iwm.
Samarium Cobalt wuxuu ku hayaa hantideeda heerkulka heerkulka ugu sareeya marka loo eego neodymium, in kasta oo awooddeeda ugu weyni ka yar tahay. Qiimaha maadada 'SmCo' ayaa ah kan ugu qaalisan, sidaa darteed waxaa lagu talinayaa SmCo kaliya marka wax qabadkeedu yahay deegaan heerkulkiisu sarreeyo waa walaac.
2.Qarafka curyaanka. oo ah magnetka joogtada ah ee loo yaqaan 'smCo magnet' wuu sarreeyaa heerkiisuna waa heerkiisu Coeff. hooseeya. Markaa waxay ku habboon tahay in lagu isticmaalo 300, heerkul sareeya.
3.SmCo magnet joogto ah waa la maqlaa waana qaloocsan yahay. Awooddeeda adag, xoogga gantaallada iyo xoogga saxaafadda ayaa hooseeya. Markaa kuma habboona qaab dhismeedka.
4.Shaqaalaha ugu muhiimsan ee loo yaqaan 'MagC' magnet joogto ah waa bir-bir (CoY99.95%). Markaa qiimahoodu waa sarreeyaa.
Astaamaha Samarium Cobalt Magnet
* Guryaha magnetic aad u sarreeya oo leh xasilloonaan wanaagsan.
* U adkaysiga heerkul sarreeya, Heerkulka Curie ee aqlabiyadda ayaa ka sarreeya 800 ?? * Karti u adkaysiga lafa-beelka, looma baahna daboolid xagga dusha sare ah.
Astaamaha Magnetic-ka ee SmCo
Heerkulka Coefficient of Br (% / ° C) -0.05 -0.03
Heerkulka Coefficient of iHc (% / ° C) -0.3 -0.2
Curie Heerkulka (° C) 700-750 800-850
mugga (g / cm3) 8.2-8.4 8.3-8.5
Vickers darantahay ingeega, (HV) 450-500 500-600
Working Heerkulka (° CC) 250 350